ब्रिटिस कलेजद्वारा नयाँ भर्ना हुन आउने विद्यार्थीहरूका लागि ओरिन्टेसन कार्यक्रम - Artha Dabali : nepal economic and business news portal
आइतवार, आश्विन ३१ गते २०७८
आश्विन ३१ गते २०७८
# तरकारी बजार
# सिभिल बैंक लिमिटेड
# सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल
ब्रिटिस कलेजद्वारा नयाँ भर्ना हुन आउने विद्यार्थीहरूका लागि ओरिन्टेसन कार्यक्रम
२०७७ चैत्र, ८ आइतवार
काठमाडौँ / थापाथलीस्थित ‘द ब्रिटिस कलेज’ले नयाँ भर्ना हुन आउने विद्यार्थीहरूको लागि ओरिन्टेसन कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । शुक्रबार सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा मार्च इन्टेकको लागि भर्ना भएका विद्यार्थीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
लाजिम्पाटस्थित -याडिसन होटलमा सो कार्यक्रम आयोजना भएको हो । बीएस्सी (हन्स) कम्प्युटिङ, बीबीए तथा बीएचएममा भर्ना भएका विद्यार्थीहरुलाई स्वागत गरिएको थियो ।
कोभिड– १९ को महामारीको कारण सन् २०२० मा धेरै कठिनाईहरु भोगेपनि कलेजले गुणस्तीय शिक्षा प्रदान गर्न कुनै कसर बाँकी राखेन । हाल नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या कम हुँदै गइरहेको अवस्थामा कलेजले ओरिन्टिेसन कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो ।
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको बेलामा पनि कलेजले विद्यार्थीहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले अनलाइन शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
सो समयमा कलेजले अनलाइनबाट पाठ्यक्रमलाई अघि बढाउने मात्र नभइ बिभिन्न सेसनहरू, वेभिनार तथा ग्राजुयसन कार्यक्रमको पनि आयोजना गरेको थियो । कलेजका एशोसियट डिन अरुणलाल जोशीले आफ्नो स्वागत मन्तव्य राखेका थिए ।
उनले कोभिड– १९ को अवस्था अझै सामान्य नबनेकोले यो समयमा स्वास्थ्य सतर्कतामा विशेष ध्यानाकर्षण गराएका थिए । साथै, उनले यो अवस्थामा पनि गुणस्तरिय शिक्षा प्रदान गर्नमा कलेजद्वारा कुनै पनि सम्झौता नहूने प्रतिबद्धता स्वागत मन्तव्यमा गरे ।
कार्यक्रममा प्रोग्राम लिडर तथा विद्यार्थीहरुले नै प्रेरणादायी कुरा तथा विभिन्न सेसनहरुको आयोजना समेत भएको थियो । विद्यार्थीहरुले भने ब्रिटिस कलेजको विद्यार्थी भइसकेपछिको अनुभव तथा आगामी दिनमा हुने अपेक्षाको बारेमा बताएका थिए ।
औपचारिक कार्यक्रमको समापन बिबिए प्रोगाम लिडर सौरभ सत्यालले गरेका थिए ।
कलेजमा हाल विद्यार्थीहरुको भौतिक उपस्थिति तथा अनलाइनबाट कक्षा लिइरहेको छ । एड्मिसन तथा मार्केटिङ विभागका प्रमुख अमरदिप मण्डलले हाल बिबिए, बिएचएम र बिएस्सी कप्युटिङको भर्ना कार्यक्रम अझै चलिरहेको जानकारी दिए । उनले भौतिक उपस्थितिमा कक्षा लिइए पनि कलेजको हातामा अनिवार्य मापदण्ड अपनाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए ।
हालको अवस्थामा दैनिक रुपमा नयाँ संक्रमितको संख्या कम हुँदै गए पनि सरकारले तय गरेको मापदण्डलाई लागू गर्दै सुरक्षित तरिकाले ओरिन्टेसन कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा सहभागीहरु सबैले मास्कदेखि स्यानिटाइजर सम्मका सबै प्रविधिहरू प्रयोग भएका थिए । त्यसैगरी कार्यक्रम स्थलमा पनि भौतिक दूरी कायम गरिएको थियो ।
# ब्रिटिस कलेज
ब्रिटिस कलेजका विद्यार्थीलाई बेलायतमा वर्किङ भिसाको अवसर
ब्रिटिस कलेजद्वारा नयाँ भर्ना भएका विद्यार्थीको लागि ओरिन्टेसन कार्यक्रम सम्पन्न
ब्रिटिस कलेजको ब्यवस्थापनमा बुटवलमा नमस्ते एकेडेमी सञ्चालन हुने, शैक्षिक गुणस्तर पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुने दाबी
सखिया नृत्य देखाउँदै थारु युवती, हेर्नुस् तस्बिरमा
आगामी तीन दिनको मौसम : कतै हिमपात त कतै मध्यमदेखि भारी बर्षा, सतर्क रहन मौसमविद्को आग्रह
काठमाडौँमा दसैँको टीकासँगै बढ्यो चहलपहल
बादलुको घुम्टोभित्र माछापुच्छ्रेको दृश्य
आज कुन देशको मुद्राको बिक्री विनिमयदर कति छ ? हेर्नुस्
युट्युवबाट सिकेर व्यावसायिक च्याउखेतीमा रमाउँदै अर्याल
मुडेको आलु प्रतिकेजी ४६.५०, गोलभेडा ११०, स्थानीय काउली ८५, डल्ले च्याउ ३३५ र छडी माछा २२५ रुपैैयाँ पर्ने, अन्य तरकारीलाई कति ?
आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान : कुन कुन प्रदेशमा छ बर्षाको सम्भावना ?